टीकापुर घटनाको बारेका कलंकको टीका लगाउने प्रयासमा सरकार ! « News24 : Premium News Channel
टीकापुर घटनाको बारेका कलंकको टीका लगाउने प्रयासमा सरकार !
सत्तामा चढ्दा संविधान र कानून मिच्ने नेपाली राजनीतिक दलहरुको पुरानै प्रवृति हो । अहिले कैलालीको टीकापुर घटना यही प्रवृति बनेर अघि आएको छ । अमानवीय र बर्बर टीकापुर घटनाका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिएर सरकारले प्रहरीको मनोबल मात्र गिराउने काम गरेको छैन , संविधान र कानूनको समेत उपहार गरेको प्रष्ट भएको छ । टीकापुर घटनालाई लिएर यतिखेर सरकार र नेपाल प्रहरी आमने सामने हुने अवस्थामा मात्र आएको छैन । कानूनको रखवारी गर्ने सर्वोच्च अदालतको समेत अवमूल्य गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ ।
तराई तथा थारु समुदायको आन्दोलनको क्रममा टीकापुरमा घरेलु हतियारको प्रयोग गरेर मारिएका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने लगायत ५ जना सुरक्षाकर्मीको मुद्धालाई सरकारले यतिबेला विवादास्पद मोडमा पु¥याएको छ । टीकापुरमा गत वर्ष भएको प्रहरी हत्यालाई राजनीतिक मुद्दा भनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले फिर्ता लिने अडान लिएपछि प्रहरी नेतृत्व र गृहमन्त्रीबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । टीकापुरमा दुई बर्षे बालक र आठ प्रहरीको हत्या गर्ने आपराधिक चरित्रका व्यक्तिहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने पक्रिया गृहमन्त्री निधिले अघि बढाइसक्नु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द« कार्कीको २०६९ वैशाख ४ गतेको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै, नियतवस गरेको हत्या, अमानवीय प्रकृतिका मानवताविरुद्धको अपराध, महिला एवं बालबालिका विरुद्धको अपराधमा कुनै सौदा गरेर मुद्धा फिर्ता गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो । तर, सरकारले सर्वोच्च गरेको यही फैसला विपरित गएर जबर्जस्ती मुद्धा फिर्ता लिने तयारीमा लागेको छ । अझ दिल्ली भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टीकापुर घटनाका फरार अभियुक्त रेशम चौधरीलाई भेटेर सरकारको तर्फबाट कस्तो संकेत दिन खोजेका हुन सर्वत्र कौतुहलको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले सत्तारोहण गर्ने क्रममा गरेको सम्झौतामा मधेस आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने लिखित सहमति गरेको थियो । त्यही सहमतिका आधारमा मधेसी मोर्चाले झन्डै पाँच सय हाराहारीमा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको नाम गृहमन्त्रीलाई बुझायो । यही माग पूरा गर्न सरकार अहिले आँखा चिम्लेर अघि बढेको छ । तर आँखा खोल्दा सरकारले आफुलाई कहाँ पाउने हो , त्यो वास्तवमा नै सोचनीय छ ।